Nomen’i Liberiana Hotantanan’ny Orinasa Iray Amerikana Tsy Miankina Ny Fanabeazana Fototra · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 06 Avrily 2016 3:01 GMT
Vakio amin'ny teny Español, русский, Swahili, Ελληνικά, Français, English
Mpianatra ao amin'ny faripiadidian'i Bong, Liberia, mianatra miaraka amin'ny labozia. Mpianatra tsy afaka namonjy sekoly nandritry ny ady an-trano tao Liberia izy ireo. Sary ho an'ny sehatry ny daholobe, an'ny Masoivohom-panjakana Amerikana momba ny Fampandrosoana Iraisampirenena (USAID)4.
Vonona ny haka laharana voalohany iray hafa ao Afrika i Liberia. Izy no firenena voalohany tao Afrka nanana vehivavy filoham-pirenena rehefa voafidy i Ellen Johnson-Sirleaf tamin'ny 2006.
Amin'izao fotoana izao, mirotsaka amin'ny antsoin'ny sasany hoe ‘laharana voalohany hafa indray ao Afrika’ ilay firenena : famoahana tanteraka ny rafitry ny fampianarana garabola sy fanabeazana fototra ho anà orinasa Amerikana tsy miankina.
Tena nizaka ny mafy ny fanabeazana tao Liberia noho ilay Ady An-Trano Voalohany nifanaovan'ny Liberiana sy ny Ady an-Trano Faharoa teo anelanelan'ny 1989 sy 2003. Notombanana ho 50% amin'ny tovovavy ary 68% amin'ny tovolahy no nahavita manontolo ny fanabeazana fototra na, raha tsy izay, mba afaka mamaky fehezanteny iray manontolo. Vao mainka niha-henjana ny toedraharaha taorian'ilay olan'ny valanaretina ebola teo aloha teo.
Tamin'ny Janoary 2016, nanambara i George Werner, minisitra Liberiana misahana ny fanabeazana, fa mety ho avoaka hotantanan'ny Bridge International Academies, orinasa iray tsy miankina manana ny foibeny any Etazonia, ny sehatry ny garabola sy ny fanabeazana fototra, mandritry ny dimy taona. Handoa vola maherin'ny 65 tapitrisa dolara ny governemanta Liberiana amin'izany.
Ny Bridge International Academies izay milaza ny tenany ho ny orinasa lehibe indrindra misahana fanabeazana mitondra fivoarana, miasa amin'izao fotoana izao ao Kenya sy Ogandà. Mifantoka indrindra amin'ireo mpampianatra ny fomba fampianaran'ilay orinasa — ireo mpampianatra izay tsy ilaina akory hanana diplaoma avy amin'ny anjerimanontolo rehefa avy nomena fiofanana nandritry ny dimy herinandro — amin'ny famakiana ireo lesona efa voasoratra avy ao anaty takelaka (tablety) entin-tànana. Mety hahatratra hatramin'ny 60 no isan'ny mpianatra isaky ny efitrano.
Tsy toy ny sekolin'ilay orinasa ao Kenya sy Ogandà, izay mandoa saram-pianarana eo amin'ny 6 dolara isaky ny dingana eo ny fianakaviana, fa ny ray amandreny ao Liberia kosa tsy hamoaka vola am-paosy ho an'ny fanabeazana.
Niteraka fanakianana avy ao anatiny sy iraisampirenena ilay hetska natao. Miomana ny hanao tsindry amin'ny governemanta ao Liberia ireo manampahaizana momba ny fanabeazana, mba tsy hanohizana io drafitra io.
Tamin'ny Martsa, nanohitra ilay drafitra, Kishore Sing, mpampakateny manokan'ny Firenena Mikambana momba ny zo hahazo fanabeazana, snilaza tao anaty fanambaràna an-gazety hoe:
Mahatsikaiky ny hoe i Liberia tsy manana otrikarena hiatrehana ny tena andraikiny hanomezana fanabeazana fototra maimaimpoana ho an'ny ankizy tsirairay, nefa afaka mahita vola be tsy tambo hisaina tahaka izany mba hanaovana fifanarahana aminà orinasa tsy miankina hanao ny asa amin'ny toerany.
Nanoratra ho an'ny gazety South Africa's Mail & Guardian, nilaza i Christine Mungai fa ny fomba fanaon'ny Bridge International Academies amin'ny fampianarana dia mampihena ny fifanakalozana eoamin'ny mpampianatra sy ny mpianatra ary “mamono ny toetsaina tia karokaroka.” Sady norisiny koa ny olona amin'ny filazan'ilay orinasa fa hoe mahavita tsara kokoa noho ireo mitovy kilasy aminy any amin'ny sekolim-panjakana ny mpianatra ao amin-dry zareo, tamin'ny fitanisàna angondrakitra avy amin'ny fanadihadiana irya izay ilay orinasa ihany no nampanao azy.
Na izany aza, mety ho fanamby tsara ho an'i Liberia ny fanomezana ny fanabeazana ho an'ny tsy miankina, ny rafi-pampianaran-dry zareo izay “mitontongna be” aminì'izao fotoana izao, hoy izy nanaiky:
Amin'izay endriny izay, ny rafi-panabeazana iray izay narafitra avy tamin'ny fandraisana andraikitra, fampanarahana fenitra, fandalinana hentitra, ary fanovàna politika izay afaka tohanana aminà fitambaran'angondrakitra manankarena/feno tsara – na ho tsy mankina aza – dia tsara lavitra noho izay efa ananan'i Liberia amin'izao fotoana izao.
Tamin'ny fanehoany hevitra momba ilay vaovao, Jan Resseger, Amerikàna iray manampahaizana momba ny fanabeazana no sady bilaogera, nanontany izay antony manosika ireo mpampiasa vola ao aminìilay orinasa, ka isan'izany ny International Finance Corporation, sampan'ny Vondron'ny Banky Iraisampirenena:
Tsy maintsy jerena ny antony manosika ny sasany amin'ireo antsoina hoe mpampiasa vola nofaritana ho toy ny fanohanana ny asan'ny Bridge International Academies, ohatra i Bill Gates sy Mark Zuckerberg. Ireny malala-tànana mpikirakira ny teknolojia ireny ve manohana orinasa iraisampirenena misahana fanabeazana mba ho ampahany amin'ny asa soa taon'izy ireo sa ny tanjony dia ny hanitatra ny tsenan'ny manerantany amin'ny karazana teknolojiam-panabeazana izay niteraka ny harenan'izy ireo manokana?
Ny Tatitra Fanarahana Maso ny Fanabeazana Manerantany, izay avoakan'ny UNESCO, dia naneho ahiahy momba ilay olana:
Ny fieritreretana fotsiny ny sekoly ho toy ny toerana hianarana mamaky teny dia mety ho hevitra voalanjalanja ihany ho an'ny firenena iray izay ny ankamaroan'ny ankizy ao aminy no tsy afaka manatratra na dia izay fotsiny aza. Kanefa, mety hampietry be ny tanjona andrasana amin'ny fanabeazana izy io. Ilain'ireo mpamolavola ny politika ny ho tonga saina fa hoe ny fampianarana tsara dia tsy afaka omen'iza n'iza amin'ny alàlan'ny soratra vakiana fotsiny.
Nandefa taratasy ho an'i George K. Werner, Minisitra Liberiana misahana ny Fanabeazana, ny Fikambanana Nasionalin'ireo Mpampianatra ao Liberia, ankoatra ireo fikambanana sivily hafa, hanazavana ny ahiahin'izy ireo hoe hiteraka “loza mitatao goavana” ilay drafitra hanomezana ilay sehatra ho an'ny tsy miankina ary endriky ny “famadihana ho raharaham-barotra ny tolotra fanabeazana ao Liberia.” Mandritra izany, naneho ny fomba fijeriny tao amin'ny media sosialy ny hafa: